Muxuu Mareykanka ka yiri doorashadii Xasan Sheekh? - Caasimada Online
Home Warar Muxuu Mareykanka ka yiri doorashadii Xasan Sheekh?
Washington (Caasimada Online) – Warsaxaafadeed kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa waxaa looga hadlay doorashadii Xasan Sheekh Maxamuud ee habeenkii Axadda, 15-kii May ka dhacday Teendhada Afisyoone ee magaalada Muqdisho.
Mareykanka ayaa soo dhoweeyey doorashada Xasan Sheekh oo mar labaad loo doortay Madaxweyne, wuxuuna tilmaamay in Soomaaliya ay hadda heysato fursad muhiim ah.
“Soomaaliya waxay hadda haysataa fursad ay diiradda ku saari karto dib u habeynta siyaasadda, dhaqaalaha, iyo amniga ee lagama maarmaanka u ah horumarinta danaha dadka Soomaaliyeed” ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda.
Sidoo kale Mareykanka ayaa ku booriyey Madaxweynaha cusub inuu xooga saaro horumarka dowladnimada, dib u dhiska ciidamada iyo dib u habeynta dhaqaalaha dalka.
“Waxaan ku dhiirigelinaynaa Madaxweyne Xasan Sheekh iyo dhammaan madaxda Soomaaliya inay mudnaanta siiyaan xoojinta dowladnimada iyo hay’adaha dimuqraadiga ah; horumarinta ciidamada ammaanka si ay uga hortagaan ugana hortagaan argagixisanimada iyo inay si buuxda mas’uuliyad amni ugala wareegaan howlgalka Midowga Afrika ee ku meel gaarka ah ee Soomaaliya; samaynta dib-u-habayn dhaqaale si loo dhamaystiro waddada Soomaaliya ee deyn cafinta iyo xoojinta dhaqaalaha; iyo fududaynta gaarsiinta gargaarka bini’aadantinimo ee malaayiinta Soomaalida ah ee la ildaran abaarta ba’an,” ayaa markale lagu yiri qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda.
Ugu dambeyn Mareykanka ayaa ugu baaqay dowladda cusub inay xoojiso arrimaha dib u heshiisiinta iyo wada-hadallada, si xal looga gaaro khilaafaadka dib u dhigi kara dalka.
“Dib-u-heshiisiinta, isu-tanaasulka, iyo wada-hadallada la xoojiyey ee ka dhexeeya dhammaan heerarka dawladda iyo dhammaan bulshooyinka ayaa muhiim u ah guusha dadaalladaas” ayaa lagu yiri warsaxafadeed kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibada Mareykanka,”.
Dowladda Mareykanka ayaa ka mid ah dowladaha aad u taageero Soomaaliya, waxayna sidoo kale ay qayb ka tahay dagaalka adag ee lagula jiro kooxda Al-Shabaab.